khilaafka Trump iyo waddamada kale ee NATO, Muxuu ku saleysan yahay ? – AwKutub News
khilaafka Trump iyo waddamada kale ee NATO, Muxuu ku saleysan yahay ?
Leave a Comment on khilaafka Trump iyo waddamada kale ee NATO, Muxuu ku saleysan yahay ?
Khilaafka kharashka gaashaandhigga muxuu ku saabsan yahay?Trump ayaa waddamada kale ee gaashaanbuurta Nato ku eedeeyay in ay Mareykanka ka faa’iideysanayaan.
Previous Entry Maanso yahanimadu maa loo dhashaa, mise waa la barran karaa?
Next Entry waddanka Thailand: 12kii wiil iyo tababarahooda kubbadda oo la soo badbaadiyay